ITIL လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးအလုပ်ရှာဖွေရေးအခွင့်အလမ်းများ - ၎င်း၏ Tech မှကျောင်း
သင့်ရဲ့အင်္ကျီလက်အောက်မှာတစ်ဦး ITIL အောင်လက်မှတ်ထားရှိခြင်းသည်သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖို့အဓိကအကူအညီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာလမ်းဒါ့အပြင်တစ်ဦးမျှော်လင့်ချက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုလည်းအဆင့်မြှင့်တင်မဆိုအသင်းအဖွဲ့တစ်ခုထက်သာလွန်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအာမခံမရရုံ။ သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်မှအဓိကဆုကြေးဇူးကိုဖြစ်ခြင်း, ကအိုင်တီဝန်ဆောင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်သင်ယူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့သုို့ခေါ်န်းကျင်လာမည့်သူဌေးတစ်ဦးနားလည်မှုပေးသည်။
အဆိုပါကော်ပိုရေးရှင်းကမ်ဘာပျေါတှငျတစျခုစီစီးပွားရေးလုပ်ငန်း entity တစ်ခုသီးခြားကမ်းလှမ်းမှုနှင့်အတူသူတို့၏ကျေးဇူးရှင်၏အရှိဆုံးစံပြထောက်ခံမှုပေးခြင်းများအတွက်တတ်၏။ တသမတ်တည်းစမ်းသပ်ယနေ့ပိုကြီးအသင်းဖြစ်ပါသည်, ပိုမိုမြင့်မားသူတို့စျေးကွက်အတွက်ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်နှင့်ပိုပြီးထင်ရှားတဲ့တစ်ခုချင်းစီကိုစမ်းသပ်၏နောက်ဆက်တွဲတိုက်ဖျက်ဖို့သူတို့ရဲ့တွန်းအားပေးသည်စမ်းသပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အဆုံး၌ဖြစ်ကအနည်းငယ်သို့မဟုတ်သိသိသာသာ, မျှော်မှန်းချက်, တပ်ကြပ်အသင်းအဖွဲ့များအပေါ်ပြေးတစ်ဦးကကမ္ဘာကြီးကိုစျေးကွက်အတွက်ကောင်းမကောင်းကြိမ်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းပေး။ အခက်အခဲအမျိုးမျိုးရှိသမျှတဦးတည်းရင်ဆိုင်ဖို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်အရှိဆုံးအသိဉာဏ်ချဉ်းကပ်ယခု မှစ. ကြီးမားကံမကောင်း၏အလေးသာ invalidating, သာမန်အောင်မြင်မှုများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဦး Hang ရရှိနိုင်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒြပ်စင်ထကောက်နေများအတွက်ပိုကြီးအသင်းအဖွဲ့များ၏ဆန်းသစ်သောစွမ်းရည်ဆီသို့ဦးတည်ကြည့်ပါ။
အမျိုးမျိုးသောအသင်းအဖွဲ့များယနေ့ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအပေါ်မှီခိုဖြစ်ကြသည်။ လတ်တလော perky တိုးချဲ့ ITIL ဖွဲ့စည်းပုံမှာဖြစ်ပါတယ်။ ITIL ဖွဲ့စည်းပုံအားဖြင့်အပြီးခေါ်ဆောင်သွားလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည်၎င်း၏ပိုက်ဆံ related အရပ်ထအသက်ဝင်စေဖို့အနေနဲ့အသင်းအဖွဲ့ကူညီပေးသည်။ ITIL ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနောက်ပိုင်းတွင် ITIL ကျွမ်းကျင်သူများကများအတွက်အကျိုးစီးပွားမြှင်သူတို့အားအလွန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းဖြစ်ခြင်းတက်ကုန်ပြီ။ တစ်ဦး ITIL လေ့ကျင့်ရေးကသူတို့ကိုအရှိဆုံးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဘို့အအံ့ဆဲဆဲပြီးနောက်ကိုမြော်လင့်အောင်, အကိုယ်စားလှယ်လောင်းများမှ ITSM ၏အောက်ဆုံးသတင်းအချက်အလက်မှထိပ်တန်းပေးသည်။ ITIL ကိုပြင်ဆင်အလုပ်အင်အားစုနည်းတူဝေးလစာအဖြစ်ပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာတစ်လျောက်ပတ်သောအစုအဝေးကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်နိုင်စွမ်းအစိတ်အပိုင်းများများအတွက်အလုပ်လုပ်နေကြသည်။ ပတ်လည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတ္ထုများ၏တစ်ဦးကကြီးမားအရေအတွက်က ITIL ထောကျခံခဲ့ပါပြီ။ ပိုပြီးဘိုးအင်း, Hewlett-Packard, IBM, Microsoft, Pfizer, တိုယိုတာ, Walmart, နာဆာ Disneyland နှင့်တစ်ဦးအလွန်ကြီးစွာသောသဘောတူညီချက်နဲ့တူအသင်းအဖွဲ့များ ITIL နှုတ်ဆက်ပြီးပါပြီ။ ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းများနှင့်အခြေခံအုတ်မြစ်၏ပစ္စုပ္ပန်နှင့်အသစ်သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှစ်ဦးစလုံး၏စွမ်းရည်များနှင့်လုံလောက်မှု lib အနေနဲ့ ITIL certified ရရှိထားပြီးကြော်ငြာအသုံးချသောအသင်းအဖွဲ့များ။
ITIL လေ့ကျင့်ရေး တောက်ပအနာဂတျအတှကျလမ်းကြောင်းရှင်းလင်းရေးတဲ့ထင်ကြေးတူရိယာများကဲ့သို့အားလုံးအကောင့်အားဖြင့်ဖြစ်သည်။ အတူရင်းနှီးမြှုပ်နှံကျွမ်းကျင်သူများက ITIL လေ့ကျင့်ရေး ကွဲပြားခြားနားသောခွဲခြားမှုအတွက်လက်မှတ်တွေထက်ပိုပြီးဝင်ငွေနေကြသည်။ ဒါဟာအိုင်တီန်ဆောင်မှုများ၏လယ်ပြင်တွင်ယခုသူတစ်ဦးချင်းစီမှအစားအစာတစ်ဦးထက်သာလွန်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်တိုးပွားပေးပါသည်။ Iအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်တွေအတွက် သူတို့ရဲ့စိတျအပိုငျး upgrade လုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းနှင့်အတူအကြံပေးနှင့် ITSM ကျွမ်းကျင်သူများကအိုင်တီတိုးတက်ကောင်းမွန်ခြင်းနှင့်ထို့ပြင်အိုင်တီအဖွဲ့အစည်းများတွင်ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်အိုင်တီသည့်ဝန်ဆောင်မှုများသူမြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒြပ်စင်ဖို့အကျိုးရှိပေါ်ထွန်းရေးဖြစ်သည်။
အိုင်တီတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသောကျွမ်းကျင်သူများကစီမံခန့်ခွဲမှု, Project မှစီမံခန့်ခွဲမှု, ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုဒီဇိုင်းနှင့်နည်းစနစ် ITIL အောင်လက်မှတ်ကနေအများဆုံးအကျိုးဖြစ်ထွန်းသည့်ဝန်ဆောင်မှုများ။ ဘေးဖယ်, ဤမှသည် ITIL သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ အိုင်တီအုပ်ချုပ်ရေးစီးအနင်းစုံစမ်းစစ်ဆေး, ထောက်ခံမှုအင်ဂျင်နီယာများ, နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုနှင့်အကူအညီစားပွဲပေါ်မှာအင်ဂျင်နီယာများအဖြစ်လက်တို့ကိုကြိုးစားနိုင်ပါတယ်။ ITIL အတွက်လေ့ကျင့်ရေးဆန်းသစ်တီထွင်မှုအတွက်လတ်တလောတိုးတက်မှုဘို့ကိုယ်ကိုကိုယ်ပြန်ဆောက်ဖို့လူတပေးအပ်နှငျ့တောအခက်အခဲများရင်ဆိုင်ရနိုင်စွမ်းနှငျ့အတူသူ့ကိုထောက်ခံပါတယ်။
An ITIL အောင်လက်မှတ် နောက်ပိုင်းတွင်တစ်ဦးထက်သာလွန်အလုပ်အကိုင်အလားအလာများအတွက်မိမိအလေးသာမှုအဆင့်မြှင့်သည့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်တစ်ခုအစွန်းကိုထည့်သွင်းဖို့လူတကူညီပေးသည်။ ဒီနေ့ရဲ့ကွန်ပျူတာကာလအတွင်းအသင်းအဖွဲ့များ ITIL စိတ်ကူးနှင့်အတူ၎င်းတို့၏အဆောက်အဦများတက်အသက်ဝင်စေဖို့စတင်ပါပြီကတည်းကသူတို့၏သင်္ချိုင်းကိုလိုအပ်နေများမှာ ITIL သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းကျွမ်းကျင်သူများက။ ဒါဟာနောက်ပိုင်းမှာဆန်းသစ်တီထွင်မှုများ၏အဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲတောင်းဆိုမှုများထံမှအခြကြောင်းတာထက်ကိုပိုပြီးပြည်နယ်တစ်ခုပုံပျက်မဟုတ်ပါဘူး, ITIL အောင်လက်မှတ် အဆိုပါအိုင်တီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာသူတို့ရဲ့အလွန်ကိုယ်ပိုင်အထူးပြုလုပ်ရှာအံ့သောငှါအဘယ်သူတစ်ဦးချင်းစီအဘို့အတညျ့အလငျးမသင်မနေရတက်အဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ်။
ဤတွင် ပတ်သက်. ဆက်စပ်ဘလော့ဂ် ITIL အောင်လက်မှတ်များအတွက်ခြေလှမ်းလမ်းညွှန်ခြင်းဖြင့်တစ်ဦးကခြေလှမ်း